I-VisCircle: Thuthukisa amakhasi wakho womkhiqizo we-Ecommerce nge-3D Technology | Martech Zone
NgoLwesibili, ngoJulayi 10, i-2018 Douglas Karr
Ukuqamba kobuchwepheshe kube yisibusiso emphakathini wethu kanye nezinsimu nezimboni eziningi kakhulu ngezindlela eziningi. Enye ye-ecommerce innovation kube ukusetshenziswa kobuchwepheshe be-3D. Umkhawulo wewebhu (ngalesi sikhathi) yikhono lokuzizwela ngokuphelele umkhiqizo ofana nalowo esiwenzayo mathupha esitolo.
Kuze kube yilapho i-AR ne-VR yamukelwa kabanzi, umuzwa onomthelela omkhulu futhi othintekayo yikhono lokuhlola kahle umkhiqizo ku-inthanethi lapho ungazungezisa futhi usondeze umkhiqizo ukuze ubone zonke izici zawo. Ngesikhathi ngisanda kuthenga ibha yomsindo yesitudiyo sethu, ngikwazile ukuzungeza nokusondeza kokufakwayo ukuqinisekisa ukuthi iyahambisana nenye imishini esasinayo. Lokho kwakulula kakhulu kunokususa ukhula ngamashidi wolwazi womkhiqizo!
Yini i-3D Configurator?
I-3D Configurator uhlelo lokusebenza oluvumela amaklayenti akho ukuthi abonise imikhiqizo yakho kuzo zonke izinhlangothi. Izokwenza amaklayenti akho akwazi ukwenza ngokwezifiso imikhiqizo yakho ngokushesha nangokubambisana. I-3D Configurator yesikhathi sangempela iyithuluzi elingakhuphula amazinga wokuguqulwa kuwebhusayithi yakho. Le ndlela yokuthengisa ye-3D ivumela amakhasimende ukuthi ahlole futhi enze ngezifiso imikhiqizo ngesikhathi sangempela. Ukusebenzisana kwe-3D kutholakele ukwenza ngcono ukuxhumana kwamakhasimende futhi - ekugcineni kwaneliseke. Ngokwandisa ukuphelela kokuhlolwa, unganciphisa ukubuya okuphelele nokukhwabanisa kwamakhasimende.
I-VisCircle - Inkampani ye-3D Configurator
I-VisCircle ungumhlinzeki wesikhathi sangempela se-3D Configurator. Noma ngabe uthengisa indandatho yomshado, usofa, imoto, izitsha noma ipeni, bangayenza ihlanganyele futhi ihehe. Ipulatifomu yabo inika amandla abathengisi ukuhlanganisa okwehlukile, okokusebenza, kanye nezimpawu zemikhiqizo ukukhulisa ukuguqulwa okuphelele.
The Isihleli se-3D inikezwe ama-VisCircle run kuzo zonke izinhlelo ezijwayelekile ezibandakanya iWindows, Mac OS, Android, iOS kanye nakuziphequluli ezifana neGoogle Chrome noma Firefox. Nasi isibonelo esihle:
I-BizChat: Ukuxhumana Kwethimba Nokusebenzisana